Mampihorohoro amin’ny basy sy ny famaky: mpanao trafika 6 voasambotra niaraka tamin’ny sokatra 190 | NewsMada
Henjana ny ady ifanandrinana amin’ireo mpanao trafikana sokatra any amin’ny distrikan’i Bekily, faritra Androy. Mampihorohoro amin’ny basy sy ny famaky mihitsy izy ireo. Na izany aza, nisy enin-dahy voasambotra, niaraka tamin’ny sokatra miisa 190.
Mirongatra ny fangalarana sy ny fivarotana sokatra any amin’ny distrika Bekily sy Ambovombe, faritra Androy. Araka ny loharanom-baovao azo antoka, miisa enina ny mpanao trafika sokatra tratran’ny tompon’andraikitra, raha 24 ny tena isan’izy ireo, ny alin’ny 11 desambra teo. Tena sahirana anefa izy ireo satria tsy ampy sady voafetra ny hoenti-manana, sady tsy mifandanja ny hery, manoloana ireo olon-dratsy, izay manana basy sy famaky, nefa tanam-polo ny an’ny mpiaro ny tontolo iainana.
Lavitra ny toerana, alain’ireo tambajotra mpanao trafika any amin’ny fokontany Ankotsobe, kaominina Jafaro, 170 km miala ny distrika Ambovombe, ny sokatra, mifanila amin’ny distrika Antanimora. Raha ny tena izy, fito ny voasambotra, saingy tafaporitsaka ny iray. Voatazona ao amin’ny tobin’ny zandarimaria any Antanimora Atsimo ireo enina voalaza etsy ambony, miampy bisikileta 17 be izao, nahitana gony misy sokatra 190 ka 20 ny zana-tsokatra amin’ireo. Nisy gony telo tombanana ho ahitana sokatra 11 isan-gony efa tratra, saingy vitan’ireo olon-dratsy indray ny naka izany.
Sahirana ny tompon’andraikitra any an-toerana
Mitaraina ny tompon’andraiki-panjakana any an-toerana, toy ny Fitantanam-paritry ny tontolo ianana faritra Anosy (Dredd), satria tena tsy ampy ny hoenti-manana manoloana ireo olon-dratsy. Sarotra ny fanenjehana ireo olon-dratsy, ny fitaterana ny sokatra tratra, tokony hoentina any Tsihombe, nefa fiara efatra vao ampy. Ny fiaran’ny fikambanana iraisam-pirenena Turtle Survival Alliance (TSA) no hany nindramina.
Manainga ny sain’ny fanjakana foibe sy ny minisiteran’ny Tontolo iainana, ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana, indrindra ny sokatra, hijery akaiky ity trafika sokatra ity, satria tsy ny hazo sarobidy, ny andramena, ny harena an-kibon’ny tany, ihany no harena voajanahary tsy maintsy arovana fa tena mampiavaka an’i Madagasikara mihitsy ny sokatra, indrindra ny any atsimon’ny Nosy sy ny any Soalala.